Sawirro: RW Kheyre iyo dhigiisa Jabuuti oo heshiis dhinacyo badan wada saxiixday – Warfaafiye:
Waxaa dalka Jabuuti booqasho labo cisho ah ku jooga ra’iisul wasaaraha xukuumadda Somalia, Xasan Cali Khayre, isagoona la kulmay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo dhigiisa Jabuuti Cabdiqaadir Kaamil Maxamed.
Kheyre iyo wafdigiisa oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibada Axmed Cawad, wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Inj. Cabdi Cashuur iyo xubno kale ayaa waxay kulan la qaateen ra’iisul waasaraha Jabuuti iyo xukuumaddiisa oo ay heshiisyo dhinac badan khuseeya wada gaareen.
Qodobada ugu muhiimsan ee labada dhinac isla garteen ayaa waxaa ka mid ah in labada dal ay iska caawiyaan arrimaha ay ka mid yihiin xoojinta ammaanka, hagaajinta xariirka arrimaha dibadda, ka faa’iideysiga kheyraadka iyo in Jabuuti ay Soomaaliya ka taageerto dhanka Isgaarsiinta.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in wada shaqaynta wanaagsan ay ka dhaxaysa labada dawladood, waxa uuna Jabuuti ku bogaadiyay sida ay mar walba u caawiyaan shacabka Soomaaliyeed oo uu sheegay in ay tahay abaal ay u hayso dawladda Soomaaliya mar walba aan ka go’i doonin qalbiyada Shacbiga Soomaaliyeed.
Kulanka Kheyre uu la yeeshay ra’iisul wasaaraha Jabuuti ayaa waxaa u wehliyay dhanka Jabuuti Wasiirada Wafaafinta iyo Isgaarsiinta, Gaashaadhingga iyo arrimaha Dibadda.
Ra’iisul Wasaare Khayre iyo Wafdigiisa ayaa kulanka kadib booqday xarunta Fiber optica ee dalka Jabuuti oo qeybo ka mid ah gobolada dalka Somalia ugu yimaado Internet-ka.
Dhinaca kale, ra’iisul wasaare Kheyre ayaa kulan la qaatay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil CUmar Geelle, iyagoo ka wada hadlay xiriirka labada dal iyo xoojintiisa.
Jabuuti ayaa Somalia waxaa ka jooga ciidamo qeyb ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM, waxayna caawiyaan ciidamada Dowladda ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab. R
Daawo “Baydhaba waxaa kasoo baxay in Puntland la siiyo hub ay kula dagaalanto…